BURMA: Online News & Analysis: July 2009
Posted by Burma Golf Club at 11:39 AM0comments Links to this post
No plans to revise engagement policy
Writer: ACHARA ASHAYAGACHAT and THANIDA TANSUBHAPOL
Published: 21/07/2009 at 12:00 AM
PHUKET :The Association of Southeast Asian Nations cannot move forward until changes occur in Burma, Foreign Minister Kasit Piromya says.
The Burmese issue was the focus of talks among Southeast Asian foreign ministers here yesterday.
Other Asean ministers reiteratedacall for the Burmese government to immediately release political prisoners, including opposition leader Aung San Suu Kyi, to pave the way for national reconciliation and their participation in "inclusive" general elections next year.
Despite the strong call for change, the 10-member grouping showed no intention to revise its constructive engagement with the military regime.
"Recognising the fact that the Myanmar [Burmese] government has been trying to address many complex challenges, we remained constructively engaged with Myanmar as part of the Asean Community building process," they said inastatement released yesterday.
Burma maintained its position that "pressure from the outside and economic sanctions were hampering" its plan to restore democracy and development efforts, the statement said.
But Mr Kasit, who is chairing the foreign ministers' meeting, said his Burmese counterpart Nyan Win knew full well Asean could not move forward without changes in Burma. So it wasajoint undertaking, he said.
Asean secretary-general Surin Pitsuwan said Asean members should come forward with their own contribution to assistance in the Cyclone Nargis humanitarian efforts. Burma had received at least US$100 million (3.5 billion baht) in pledges for the latter half of the three-year recovery plan prepared by the Tripartite Core Group comprising representatives from the United Nations, Burma and Asean.
"The Asean contributions will createamomentum for international donors to give more support to the $300 million needed for the recovery," he said.
He called forasimilar strategy in dealing with the Rohingya issue in Burma. "There should beaway for the tripartite group to work together to deliver humanitarian assistance to reduce the social and economic pressures that are pushing the people out of the country," Mr Surin said.
In his opening statement to the ministerial meeting, Prime Minister Abhisit Vejjajiva outlined the future of the group which needed quick and united action to tackle threats and challenges and better linkages to serve the region's single market idea.
"Effective action must replace extended deliberation. We must show to the world that Asean is ready to meet any challenge and is well-prepared to act decisively," Mr Abhisit said.
He said the future of the group depended on efforts to invest in education and other human resource development.
"Globalisation will be beneficial only if the people in the region are competitive, prepared and able to take advantage of it," he said.
Mr Abhisit repeated calls to oppose protectionism and urged Asean to live with others' expectations of it beingadriving force.
"The world is closely watching Asean, pinning on us the hope that we will beadynamic growth pole for the global economy in this time of crisis," he said.
The ministers also endorsed the terms of reference on the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights amid Indonesian discontent over the scope of the agency's functions.
Indonesia wanted the commission to be set up in October to do more than promoting rights issues among the 10 Asean members.
Mr Kasit said at the end of the meeting Asean had opted to work towards conciliation and consultation in an amicable manner when there were differences or non-compliance including on human rights matters.
Posted by Burma Golf Club at 7:16 PM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 6:17 AM0comments Links to this post
မြန်မာသတင်းမီဒီယာဌာနများ နှင့် Yellow Journalists များအကြောင်း
-မေဆွိ မသေ ပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ။...
-မြန်မာပြည်မှာ လေပြင်းမုန်တိုင်း မတိုက်ပဲ တိုက်ခိုက်သွားခဲ့သည်ဟုကြေညာသည်။...
-လုံခြုံရေးကို အကာအကွယ်မပေးပဲ၊ ကမာရွက်ရဲစခန်းမှူးကြီး မောင်လွင် က ပြောဆိုသွားသည်ဟုဆိုသည်။...
-မေးစရာလူမရှိ၍ ငါနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုများ၊ သူငယ်ချင်းများကို သတင်းမေး Interviews များပြုလုပ် အသံလွှင့်ထုတ် နေသည်။...
-လုပ်တဲ့သူ၊ ဖြစ်နေသူက တစ်ယောက်၊ အမေးခံနေရသူက တစ်ယောက် ဆိုကြတယ်။....
-လူထု ထင်မြင်ချက်၊သုံးသပ်ချက်တွေထက် ကိုယ့်အာဘော်ကိုယ်ပြောနေကြသည်။...
-မေးသူကလည်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် မဟုတ်သလို၊ ဖြေဆိုသူတွေက လည်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များမဟုတ်။....
-ဘုန်းကြီးကျောင်းသား နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ရ နှစ်ဦး ကို ယှဉ်ပြီး Interviews များပြုလုပ်နေကြသည်။......
-ရန်သူ အားပေးလုပ်ရပ်၊ ရန်သူကိုထောက်ခံနေတဲ့ သတင်းတွေကို အတိုက်အခံ သဘောထားမပါပဲ တင်ပြနေသည်။...
-အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေဟာ အတိုက်အခံတွေကို တိုက်ခိုက်နေသည်။ အတိုက်အခံ အာဘော် မပါသော မီဒီယာတွေ ဖြစ်နေကြ။....
-ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ အမြင်ကွဲပြားသူတွေကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိ။...
စသည် စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအနှံအပြား၊ နေရာအနှံအပြား ကို သွားတိုင်း ပြည်ပ မြန်မာ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြားမှာ အမြဲ ကြားနေရ တယ်။ ငွေကြေး သန်းနဲ့ချီ သုံးစွဲ အလုပ်လုပ် နေကြတဲ့ ပြည်ပ မြန်မာ သတင်းမီဒီယာဌာနမှာ သတင်းသမားတချို့ ဟာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ စောင့်ထိမ်းရမဲ့ ကျင့်ဝတ် ( Codes of Ethics in Journalism) ထက် အရည်အသွေးမမှီ၊ မတိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေ ကို သတင်းဖော်ပြမှုကို သာ အားသန် နေကြတယ်။ မိမိ၏ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်များကို အသားပေး၍ အသံလွှင့်နေ ကြသည်။ ဒီ သတင်းဌာန (သို့မဟုတ်) သတင်း ထောက်တွေဟာ Yellow journalism ကို ကျင့်သုံး ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ သတင်းသမားတွေ ကို (Yellow Journalists) လို့ ခေါ်ဆိုကြတယ်။
တချို့ ငွေကြေး သန်းနဲ့ ချီ သုံးစွဲ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအသံလွှင့်သတင်းမီဒီယာဌာနတွေဟာ ပြည်တွင်းထဲက ဘလော့ဂါတွေ၊ Citizen Journalists တွေက အသက်ရင်း ထောင်ကျခံ ပေးပို့ထားတဲ့ သတင်းတွေကို မိမိတို့သတင်းမီဒီယာ တွေရဲ့ လှို့ဝှက်သတင်းထောက်တွေက သတင်းပေးပို့နေတာပါလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြား နေတယ်။ နားဂစ် နှင့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ အများဆုံး သာဓကတွေ တွေ့ရှိနိုင်တယ်။
အီရန် အရေးမှာတော့ CNN နှင့် တခြား အဓိက သတင်းဌာနတွေက နောက်ဆုံးသတင်းတွေကို အီရန် ဘလော့ဂါတွေ၊ Citizen Journalists တွေ ဆီက ရရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို လည်း ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာ ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNN အင်တာနက် သတင်းစာမျက်နှာမှာ IReport, Blogs စာမျက်နှာသစ်များကို ဖွင့်ပေးပြီး၊ သူတို့ လက်လှမ်းမမှီသော သတင်းများ၊ မရရှိနိုင်သော သတင်းများကို ဘလော့ဂါတွေ၊ Citizen Journalists တွေဆီမှ ရယူကြောင်း၊ အသိအမှတ်ပြု ဖော်ပြထားသလို ရရှိတဲ့ သတင်းတွေ ကို လည်း ဘယ်က ရရှိခဲ့ကြောင်း သွားရောက်ကြည့်ရှု့ နိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားတယ်။
သတင်းသမားတွေဟာ သတင်း ဘာသာပြန်၊ အသံလွှင့် ပေးရုံနဲ့ Professional သတင်းသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။ တခြားဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ အတွေးအခေါ်ရေးရာ၊ နည်းပညာရေးရာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ တွေကို အများကြီးသင်ယူကြရအုံးမှာပါ။ Professional သတင်းသမား တစ်ဦးဟာ သတင်းမီဒီယာဌာန မှာ နှစ်ချီ တာဝန်ထမ်းဆောင် စဉ် Journalism (သို့) Journalism နဲ့ ဆက်စပ်သော ဘာသာရပ် ဖြင့် ၂နှစ် (သို့) ၄ နှစ် ဘွဲ့ရ ကျောင်းပြီး သူတစ်ယောက်ဖြစ်သင့်သည်။
တချို့ ဒေါ်လာ သန်းချီ အကုန်အကျခံ သုံးစွဲနေကြတဲ့ ၀ါရှင်တန်၊ လန်ဒန် နှင့် အော့စလို အခြေစိုက် မြန်မာအသံလွှင့် မီဒီယာဌာနတွေမှာ သတင်းသမားတွေဟာ အလုပ်လုပ်နေကြတာနှစ်နဲ့ ချီနေကြပြီ။ Journalism ဖြင့် ၂နှစ် (သို့) ၄ နှစ် ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ သူဟာ အရည်အတွက်အားဖြင့် အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ၃လ သင်တန်း၊ ၆ လ သင်တန်း၊ ၉ လ သင်တန်း မျိုးကို Professional သတင်းသမားမျိုးလို့ ဘယ်သူကမှ မသတ်မှတ်ပါ။ သတင်းမီဒီယာမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသူတွေဟာ Journalism ဘာသာ ကို မလေ့လာ၊ မသင်ကြား ခဲ့ရယင် သတင်းထောက်တွေရဲ့ စောင့်ထိမ်းရမဲ့ ကျင့်ဝတ် ( Codes of Ethics in Journalism)ကိုလည်းနားလည်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Codes of Ethics in Journalism ကို နားမလည်ရင် Professional သတင်းသမားတစ်ဦးလို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ သတင်းမီဒီယာဌာနတွေလည်း ဖြစ်လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေကို မီဒီယာဌာန အကြီးအကဲ ဆိုသူတွေ က သတိပြုဖို့ လိုအပ်တယ်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက မှားနေတာကို ထောက်ပြ၊ ဝေဖန်အကြံပြုပြန်ရင်လည်း စစ်အာဏာရှင်အောက်က ကြီးပြင်းလာတဲ့ သူတွေမို့ အဝေဖန်မခံနိုင်ကြဘူး။ ဝေဖန်အကြံပြုသူတွေကို ရန်သူလိုဆက်ဆံလာကြတယ်။ ဒါတွေဟာ မတိုးတက်သေးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက် တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာသတင်းမီဒီယာ ဌာနတွေဟာ အတိုက်အခံတွေနဲ့ ဝေးကွာလာရင်း၊ ရန်သူလိုဆက်ဆံရင်း အတိုက်အခံတွေကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ မမှန်ကန်တဲ့သတင်း၊ အချက်အလက် မခိုင်လုံသော သတင်းတွေကို ဖော်ပြပေးနေတဲ့ မြန်မာသတင်းမီးဒီယာ တွေ ဖြစ်လာနေကြတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဤဝေဖန်မှုတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘလော့ဂါတွေ၊ Citizen Journalists များကို လုံးဝရည်ရွယ်ခြင်းမရှိတဲ့ အပြင်၊ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အသိစိတ်ရှိရှိ တဖက်တလမ်းက သူတို့၏ အားပေးကူညီပေးနေမှုများကို အထူးလေးစား ဂုဏ်ယူကြောင်းမှတ်တမ်းတင် ပါသည်။)
Posted by Burma Golf Club at 6:10 AM0comments Links to this post
ဟွန်ဒူရပ်စ် နိုင်ငံရေးတစေ့တစောင်း " Honduras: Coup or No Coup?"
ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် သူ့ကို သမ္မတ ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခဲ့ရတာလို့ဆိုတယ်။ ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာက အာဏာသိမ်းမည့် အစား သမ္မတ ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ဥပဒေနည်းလမ်း အရ တရားစွဲဆိုမှု (Impeachment) လုပ်ပြီး ဘာကြောင့် တရားဥပဒေဘောင်က မဖြေရှင်းသလဲဆိုတာကတော့ မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရ ကတော့ အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကြောင့် ရာထူးကဖယ်ရှားပြစ်တာလို့တော့ဆိုပါတယ်။
ဟွန်ဒူရပ်စ် မှာ သမ္မတသစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် နေ့မှာ ကျင်းပပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ သမ္မတ ဟိုဆေး ဇီလာရာ သမ္မတ သက်တမ်းဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက် နေ့မှာ ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင် မပေါ်ထွန်းအောင် ဟွန်ဒူရပ်စ် နိုင်ငံမှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အရ သမ္မတ ဟာ သက်တမ်းတစ်ကြိမ်သာ ထာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုထား တယ်။ လက်ရှိ ကြားဖြတ်အစိုးရ သမ္မတသစ် ရောဘတ်တို မီရှဲလက်တီး ဟာ ရာထူးက ဖြုတ်ချခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ သမ္မတ ဟိုဆေး ဇီလာရာ ပါတီက ဖြစ်ပြီး၊ ဟွန်ဒူရပ်စ် လွှတ်တော်ကလည်း ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့တယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရ က သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို မူလ အစီအစဉ်အတိုင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် မှာ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ဂတိပြုခဲ့တယ်။
အမေရိကန် နှင့် ဗင်နီဇွဲလား၊ ကျူးဘား၊ ဘိုလစ်ဗီးယား အပါအ၀င် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ လက်ဝဲနိုင်ငံတွေက စစ်တပ်မှ လက်ရှိ သမ္မတ ကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ထားပြီး၊ ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ဟူဂို ရှားဗက် ( Hugo Chavez) က သံတမန်ရေးအရ ဖြေးရှင်းနိုင်မှုမရှိလျှင် စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရ လိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ ဗင်နီဇွဲလား စစ်တပ်ကို တပ်လှန့် ထားခဲ့တယ်။ ဟွန်ဒူရပ်စ် စစ်တပ်က သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နှင့် ကျူးဘားသံရုံးတွေကိုယာယီ ပိတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ ဟွန်ဒူရပ်စ် စစ်တပ် ဟာ ဗင်နီဇွဲလား နှင့် ကျူးဘား သံရုံးတာဝန်ခံ တွေကို မချေမငံ နှင့် အကြမ်းဖက် ဆက်ဆံ ခဲ့တယ်လို့ ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ဟူဂို ရှားဗက် ( Hugo Chavez) က စွပ်စွဲခဲ့တယ်။
Posted by Burma Golf Club at 5:55 AM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 9:02 PM0comments Links to this post
Posted by Burma Golf Club at 12:40 AM0comments Links to this post